WPC xumbo-saareyaasha & Shirkado - Shiinaha WPC xumbo guddiga Factory
18mm sheet guddiga PVC
Xayeysiinta: daabacaadda ee xariir xariir, farshaxan, looxyo bandhigay, sanduuqa laambad
Dhismaha gogosha: qurxinta gudaha iyo dibedda, qaab dhismeedka dhismaha, kala saar guriga
Habka alaabta guriga: alaabta guriga ama xafiiska, kichen iyo musqusha
Soosaarida gawaarida iyo markabka, qalabka korontada lagu rakibo, markabka iyo diyaaradda.
Soo-saarista warshadaha: mashruuc ka hortagga jeermiska iyo ilaalinta deegaanka, qaboojiyaha, qayb-kulul oo wax lagu karsado.
tayo sare leh guddiga PVC foamex
Guddi isku dhafan oo caag ah waa nooc cusub oo ah walxo isku dhafan oo la soo saaray sanadihii la soo dhaafay gudaha iyo dibedda。
In kabadan 35% - 70% oo ah bur alwaax, buushashka bariiska, caws iyo fiilooyinka kale ee dhirta qashinka ah ayaa lagu qasaa alaabada alwaaxa cusub, kadibna la soo saaraa, la mideeyaa, la duray oo la farsameeyaa iyo teknoolojiyada kale ee wax soo saarka balaastigga ah ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro taarikada ama astaamaha. Badanaa waxaa loo isticmaalaa qalabka dhismaha, qalabka guryaha, baakadaha saadka iyo warshadaha kale. Waxaa loo yaqaan 'alwaax' alwaax fara badan oo iskudhaf ah oo balaastig ah oo balaastig ah iyo budada alwaaxda lagu qaso saami cayiman kadibna lagu sameeyo extrusion kulul.
caaga PVC 5mm cawlan
Brown PVC 5mm sheet waa nooc ka mid ah guddiga xumbo WPC. Loox-caag ah waa nooc alwaax ah (alwaax cellulose, cellulose plant) sida walxaha aasaasiga ah, polymer thermoplastic polymer (caag) iyo qalabka wax lagu farsameeyo, iwm, ka dibna si isku mid ah isugu qas. Tiknoolajiyada sare ee cagaaran iyo bey'adda u fiican ee walxaha qurxinta ee ay sameeyeen kuleylka iyo wax soo saarista qalabka caaryada ayaa leh astaamaha iyo astaamaha qoryaha iyo balaastigga. Waa nooc cusub oo ah walxo isku dhafan oo beddeli kara qoryaha iyo balaastigga.